Ibiza အန်းဒရွိုက်ကား DVD, Ibiza ကို Android 4.4 / 5.1.1 / 6.0.1 ကားရေဒီယို၏တရုတ်စက်ရုံ
ဖေါ်ပြချက်:Ibiza အန်းဒရွိုက်ကား DVD,Ibiza ကို Android 4.4 ကား DVD,Ibiza အန်းဒရွိုက်ကား DVD 5.1.1,Ibiza အန်းဒရွိုက်ကားရေဒီယို 6.0.1,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ထိုင်ခုံမှာ Android မော်တော်ကား DVD
ထိုင်ခုံမှာ Android မော်တော်ကား DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Ibiza အန်းဒရွိုက်ကား DVD, Ibiza ကို Android 4.4 ကား DVD ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Ibiza အန်းဒရွိုက်ကား DVD 5.1.1 R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
LEON 2014 အတွက် Android Bilstereo multimedia navigation  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Seat Ibiza 2013 အတွက် Android ကား DVD Player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Seaton LEON 2019-2020 အတွက် Android 9.0 Car Stereo  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Seat LEON 2014 အတွက် Android ကား DVD navigation  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Seat IBIZA 2013 အတွက် Car DVD Player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
IBIZA 2018 2019 အတွက် Android ကားရေဒီယို GPS  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
IBIZA 2013 အတွက်အော်တိုအညွှန်းမာလ်တီမီဒီယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Leon 2014 ကားတစ်စီးစတီရီယိုနှင့်မာလ်တီမီဒီယာယူနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Ibiza 2018 ဘို့ PX5 အန်းဒရွိုက်ကား Navigation  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ထိုင်ခုံစီးရီးများအတွက် Leon 2014 ကားတစ်စီး DVD ကိုကစားသမား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ထိုင်ခုံ Leon 2014 မှာ Android ကားတစ်စီး DVD ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Ibiza 2018 ဘို့အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Leon 2014 GPS နှင့်အတူကားတစ်စီးစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ထိုင်ခုံလီယွန်ဟာ android 7.1 ရွှေ့လျား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ထိုင်ခုံဟာ android 7.1 ကားတစ်စီးစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
LEON 2014 အတွက် Android Bilstereo multimedia navigation
LEON 2014 အတွက် Android Bilstereo multimedia navigation Wi-Fi ပါ ၀ င်သော LEON 2014 အတွက် Bilstereo Android Bilstereo သည်သင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုမြန်ဆန်သော LTE ဒေါင်းလုပ်အမြန်နှုန်းနှင့်အင်တာနက်ကိုပိုမိုသုံးခွင့်ပြုသည်။ RDS ဖွင့်ထားသောပါ ၀...
Seat Ibiza 2013 အတွက် Android ကား DVD Player
Seat Ibiza 2013 အတွက် Android ကား DVD Player ၁။ သန့်ရှင်းသော android 6.0.1 os ဖြင့် 8 core, 2G RAM + 32G ROM တို့ဖြင့်ပိုမိုလျှင်မြန်ပြီးချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်နိုင်သည်။ Android Car DVD Player အတွက် Seat Ibiza 2013...
Seaton LEON 2019-2020 အတွက် Android 9.0 Car Stereo
Seaton LEON 2019-2020 အတွက် Android 9.0 Car Stereo Support GPS + Radio + Bluetooth + USB + AUX In + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency: 1.5GHz RAM -...
Seat LEON 2014 အတွက် Android ကား DVD navigation
Seat LEON 2014 အတွက် Android ကား DVD navigation အသွင်အပြင်: ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 octa core system၊ 4GB RAM နှင့် 32GB ROM ပါ ၀ င်သောအဆင့်မြင့် Rockchip PX5 ပရိုဆက်ဆာ၊...
Seat IBIZA 2013 အတွက် Car DVD Player
Seat IBIZA 2013 အတွက် Car DVD Player အသွင်အပြင်: ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 octa core system၊ 4GB RAM နှင့် 32GB ROM ပါ ၀ င်သောအဆင့်မြင့် Rockchip PX5 ပရိုဆက်ဆာ၊...
IBIZA 2018 2019 အတွက် Android ကားရေဒီယို GPS
IBIZA 2018-2019 အတွက် Android ကားရေဒီယို GPS အသွင်အပြင်: ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 octa core system၊ 4GB RAM နှင့် 32GB ROM ပါ ၀ င်သည့်အဆင့်မြင့် Rockchip PX5 ပရိုဆက်ဆာ၊...
IBIZA 2013 အတွက်အော်တိုအညွှန်းမာလ်တီမီဒီယာ
IBIZA 2013 မှာ Android 8.0 PX5 အလိုအလျောက်အညွှန်းမာလ်တီမီဒီယာ IBIZA 2013 အတွက်အော်တိုအညွှန်းမာလ်တီမီဒီယာမှသက်ဆိုင်သော 1. ။ စတီယာရင်ဘီးကိုထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအများစုနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့ 2. ။ ,...
Leon 2014 ကားတစ်စီးစတီရီယိုနှင့်မာလ်တီမီဒီယာယူနစ်
Leon 2014 မှာ Android 8.0 PX5 ကားတစ်စီးစတီရီယိုနှင့်မာလ်တီမီဒီယာယူနစ် 1. 4GB RAM ကို, Octa-Core & 32GB ROM ကိုနှင့်အတူအဆိုပါနောက်ဆုံးပေါ် Android မှာ 8.0 OS ကို။ 2. Navigation အွန်လိုင်း,...
Ibiza 2018 ဘို့ PX5 အန်းဒရွိုက်ကား Navigation
Ibiza 2018 ဘို့ PX5 အန်းဒရွိုက်ကား Navigation နောက်ဆုံးကို Android 8.0 Oreo မှကျေးဇူးတင်ပါသည်သငျသညျပိုမြန် startup အမြန်နှုန်းပေးရအနည်းဆုံးသုံး apps များအတွက်နောက်ခံလှုပ်ရှားမှု minimize ကူညီပေးသည်။ ထို့အပြင် All-သစ်ကို Google ကစိတ်မချရဖြစ်လာသင့်ရဲ့...
ထိုင်ခုံစီးရီးများအတွက် Leon 2014 ကားတစ်စီး DVD ကိုကစားသမား
ထိုင်ခုံစီးရီးများအတွက် Leon 2014 ကားတစ်စီး DVD ကိုကစားသမား 7dynamic backgrouds ရရှိနိုင်: ထိုင်ခုံ series-- မိမိစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံများအတွက် 1.LEON 2014 ကားတစ်စီးဒီဗီဒီ။ ဖောက်သည်လည်းနောက်ခံအဖြစ်၎င်းတို့၏ရုပ်ပုံများကိုသုံးနိုင်သည်။...
ထိုင်ခုံ Leon 2014 မှာ Android ကားတစ်စီး DVD ကို
ထိုင်ခုံ Leon 2014 မှာ Android ကားတစ်စီး DVD ကို ထိုင်ခုံ Leon 2014 1. အန်းဒရွိုက်ကားကိုဒီဗီဒီထွက်သယ်ဖို့အီလက်ထရောနစ်မြေပုံနှင့်အတူ GPS စနစ် (Global Positioning System) ၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်တယ်,...
ထိုင်ခုံ Ibiza 2018 ဘို့ကို Android 8.0 PX5 အော်တိုမာလ်တီမီဒီယာကစားသမား 1.TPMS: လရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူဤဦးခေါင်းကိုယူနစ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်, ထို TPMS သင်တို့ကိုကယ်တင်ကူညီမယ့် pictogram display...
Leon 2014 GPS နှင့်အတူကားတစ်စီးစတီရီယို
Leon 2014 GPS နှင့်အတူအန်းဒရွိုက် 8.0 PX5 ကားတစ်စီးစတီရီယို နောက်ဆုံးကို Android 8.0 Oreo OS ကို, 1024 * 600 HD ကို capacitive touch screen, Octa Core 1512MHz CPU ကို, 4GB RAM နှင့် 32GB internal storage ချမှတ်, ပံ့ပိုးမှုမီဒီယာကဒ် / GPS...
ထိုင်ခုံလီယွန်ဟာ android 7.1 ရွှေ့လျား
ထိုင်ခုံလီယွန်ဟာ android 7.1 ရွှေ့လျား ထိုင်ခုံလီယွန်ဟာ android 7.1 ရွှေ့လျားဟာ့ဒ်ဝဲန့်သတ်ချက်များ OS ကို: အန်းဒရွိုက် 7.1.2 စနစ်က CPU ကို: ရော့ခ် chip ကို PX3 Cortex A9 ရမ်: Samsung DDR3 ကို 2GB Flash ကို: 16GB ရေဒီယို: FM ရေ / AM ဂျီပီအက်စ်: SIRF...
ထိုင်ခုံဟာ android 7.1 ကားတစ်စီးစတီရီယို
ထိုင်ခုံဟာ android 7.1 ကားတစ်စီးစတီရီယို ထိုင်ခုံဟာ android 7.1 ကားတစ်စီးစတီရီယိုဟာ့ဒ်ဝဲန့်သတ်ချက်များ OS ကို: အန်းဒရွိုက် 7.1.2 စနစ်က CPU ကို: ရော့ခ် chip ကို PX3 Cortex A9 ရမ်: Samsung DDR3 ကို 2GB Flash ကို: 16GB ရေဒီယို: FM ရေ / AM ဂျီပီအက်စ်:...
တရုတ်နိုင်ငံ ထိုင်ခုံမှာ Android မော်တော်ကား DVD ပေးသွင်း
Ibiza အန်းဒရွိုက်ကား DVD (wifi ကားတစ်စီး DVD player)
2009 ခုနှစ်တွင် 1.Established, Shen Zhen Klyde အီလက်ထရောနစ် Co. , Ltd 7300 စတုရန်းမီတာဧရိယာဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့် 230 ထမ်းလုပ်ကိုင်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ 18 အစဉ်အမြဲတိုးတက်အောင်စောင့်ရှောက်သော R & D အင်ဂျင်နီယာများနှင့်ပညာရှင်များကြုံတွေ့နှင့်လစဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်အကြောင်းကို 27,000 ယူနစ်ဖြစ်ပါတယ် .Our client`s လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ထုတ်ကုန်အသစ်တွေဖွံ့ဖြိုးဆဲရှိသည်။ android ဖုန်းအပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့, ဂျပန်, ရုရှား, ယူကရိန်း, တူရကီ, စပိန်, ဂျာမနီ, အီတလီ, အီရန်အနေဖြင့်အများအပြားတန်ဖိုး clients များနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့ကြ ပါကစ္စတန်, ဒူဘိုင်း, အစ္စရေး, ကိုရီးယား, ဆော်ဒီအာရေဗျ, အိန္ဒိယ, ဘရာဇီး, etc ။
Ibiza ကို Android 4.4 ကား DVD, ရှိသမျှ function ကိုအတူ7လက်မ HD ကိုမျက်နှာပြင်။ ပိုများသောထုတ်ကုန်မကြာမီထွက်လာမယ့်နေကြသည်။
2.Ibiza အန်းဒရွိုက်ကား DVD, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောအခမဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံနှင့်အတူ 5.1.1: သင်ထိုကဲ့သို့သောအခမဲ့များအတွက် Google မြေပုံ IGO, Sygic နှင့် Waze အားမြေပုံအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းမြေပုံများအားအလွယ်တကူဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Google ကမြေပုံနှင့်အတူ, သင်အရှိဆုံးတိကျမှုနှင့်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်လမ်းကြောင်းများ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအသွားအလာဒေတာနှင့်ပိုပြီးရနိုင်။ သင့်ရဲ့လမ်းတစ်ဝှမ်းပိုမြန်လွယ်ကူမည်သည့်အခါမျှရှာပါ။ လွယ်ကူသော-connected အင်္ဂါရပ်ကိုထောကျပံ့: android စမတ်ဖုန်းနှင့် devices များနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့, အလွယ်ကူသော-connected အင်္ဂါရပ်သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းများနှင့်ကားကိုဦးခေါင်း uni အကြားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာလိုအပ်သည့်အပိုမရှိဆော့ဗ်ဝဲနဲ့, USB ကနေတဆင့် Ibiza အန်းဒရွိုက်ကား DVD ရန်သင့်စမတ်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
3.Ibiza က Android 6.0.1 ကားရေဒီယို, နယူး HD ကို 1024X600 capacitive touch screen: သင်၏စမတ်ဖုန်းတွင်တွေ့ရှိရတူညီသောထိတွေ့မျက်နှာပြင်အစဉ်ထက် ပို. တုံ့ပြန်မှု, Bulit-in ကို WIFI ဟော့စပေါ့မျှဝေ: သင်တို့အဘို့လွယ်ကူပြီးချောမွေ့စွာအင်တာနက် access ကို browser ကိုအင်တာနက် အခမဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံနှင့်အတူဂိမ်းကို download apps များ, ဒါမှမဟုတ်ပင်အညွှန်း play, သင့်မေးလ်စစ်ဆေး, အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှု။
Ibiza အန်းဒရွိုက်ကား DVD Ibiza ကို Android 4.4 ကား DVD Ibiza အန်းဒရွိုက်ကား DVD 5.1.1 Ibiza အန်းဒရွိုက်ကားရေဒီယို 6.0.1 kia အန်းဒရွိုက်ကား DVD